Munguva pfupi yapfuura: Gadzira otomatiki, Gadzirisa uye Govana Yemagariro Midhiya Dzemagadzirirwo Uchishandisa AI uye zviripo Zvemukati | Martech Zone
B2B Kushambadzira Shanduko: Inotevera-Chikamu ABM | Musangano Wepamhepo | Chikumi 7-10, 2021
Munguva pfupi yapfuura: Gadzira otomatiki, Gadzirisa uye Govana Yemagariro Midhiya Dzemagariro Uchishandisa AI uye zviripo Zvemukati
Chipiri, May 11, 2021 Chipiri, May 11, 2021 Douglas Karr
Mapurogiramu makuru eruzhinji enhau anotanga nehukuru hwepfupi zvemukati zvaunogona kupururudza munzira dzako dzese uye kuita kuti wese wekambani yako awedzere. Zviri nyore kuita kamwe, kaviri, kana katatu. Asi mazana nezviuru enguva? Ndipo panoburitswa huchenjeri hwehukama hwevanhu nguva pfupi yapfuura nekushandura chero zvemukati zvemukati kuita mapoka enhau enhau kukwirisa mapurogiramu ako enhau.
Munguva pfupi yapfuura Artificial Social Intelligence Platform Inosanganisira
AI Zvemukati Munyori - Iwe watove nekudyara mune zvemhando yepamusoro zvemukati izvo parizvino zvakasungwa mumavhidhiyo, podcast, uye marefu-mafomu akanyorwa magwaro. Munguva pfupi yapfuura AI Zvemunyori Zvemukati zvinonwisa zvese zvemukati-zvemukati zvemukati uye zvinokupa iwe kumashure emapoka eakafanorongedzwa mitsva yemagariro midhiya akagadzirira iwe kuti uongorore uye upe muzvirongwa zvako zvemagariro enhau.
Social Media Marketing - Kamwe Munguva pfupi yapfuura AI Zvemukati Kunyora software anonyora zvako zvemagariro midhiya, iwe, Munguva pfupi inokupa zvese zvaunoda kuti uongorore, kugadzirisa, kubvumidza, kuronga, uye kutsikisa mapoka emapepanhau enhau munharaunda dzako dzese. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita.
Kutengesa Kwemagariro - Kana chirongwa chako cheshambadziro chezvemagariro chichifamba mushe, danho rinotevera ndere kuunza vatungamiriri vako uye zvikwata zvekutengesa muchirongwa chako kuti uwedzere kuvepo kwako uye meseji mumusika. Ichangoburwa yekutengesa mhinduro mhinduro inovimbisa yega pasocial media post inogara iri pane meseji uye inoita kuti vashandi vatumire pre-vanotenderwa enhau midhiya nhepfenyuro munzira dzavo dzega. Kana, unogona kushandisa yedu nhoroondo dzemubereki nemwana kushambadzira zvemagariro enhau pachinzvimbo chevashandi vako saka ivo havafanirwe kana kusimudza munwe.
Yemagariro Media Ongororo - Zvemukati ndiMambokadzi uye mhando yezvinhu zvese zvemagariro enhau. Munguva pfupi yapfuura yemagariro midhiya analytics inoongorora kusvika uye kubatirana kwese pasocial media post uye inokupa kurudziro yekuisa mukati memitemo yako yekunyora.
Isu tinoshandisa Nguva pfupi yapfuura kuwedzera, kupatsanura, kuyedza, uye kuunganidza mhinduro pane raibhurari yedu yevhidhiyo uye takaona kufanana kukuru pakati pezvinoitwa neLately AI se "nguva dzinotenderwa" maringe nezvinotorwa nechikwata chedu. Munguva pfupi yapfuura kugona kudzidza uye kugadzirisa mamiriro ezvinhu akakosha enhau enhau kwakakosha kune chero munhu anoda kuyera zvirimo zvinoburitswa.
Munguva pfupi yapfuura epuratifomu yehungwaru yekunyepedzera inogara ichidzidza kubva kune ako epashure midhiya enhau uye inovaka yekunyora modhi zvichibva pane izvo zvinonyanya kufarira vateereri vako. Vatengi vanoona chaiyo inoshamisa mhedzisiro… inosanganisira 12,000% kuwedzera mukubatanidzwa, 245% mamwe mabhatani, uye 200% zvimwe zvinotungamira.
Kumbira Dare Razvino
Tags: ai gutsikana munyoriai gutsikana kunyora softwareai chikuvachakagadzirwa njereautogenerate zvemukatishandura midhiya enhaushandura zvinyorwa zvemagarironguva pfupi yadarikasocial intelligence chikuvamagariro enhau analyticskutengesa munharaunda
Vakakanda: Iyo Audio Yemukati Yekushambadzira Solution yeMabhizinesi Brands
Syncari: Batanidza uye Gadzirisa Dhata-Rinoshanda Dhata, Gadzirisa Yekufashukira Kubasa Uye Govera Yakavimbika Insights Kwese Kwese.